China CPL musuwo Mugadziri uye Mutengesi | Mujiang
Iwo maratidziro, ruvara uye kusakara kusagadzikana kweiyo CPL yekumhanyisa mutsetse uye melamine yemahara mikova pani yakafanana, iyo inogadzirisa kukanganisa kweakakura mavara mutsauko uye isiri yekupfeka kusagadzikana kunokonzerwa melamine yakafanana nezvimwe zvinhu. Naizvozvo, ndiyo yakanakisa inoenderana neye melamine musuwo.
2.Fire nemishonga uye hunogara
CPL ine yakakwira pamusoro pekuwandisa, yakakwira kusakara kusagadzikana, yakanaka kuramba kupisa, murazvo unodzora, hunyoro-humbowo, hapana discoloration uye kukwenya kuramba. Inofananidzwa nezvimwe zvekushongedza pamusika, senge pendi, PVC firimu, polymer bhodhi, nezvimwewo, pamusoro pacho panonyanya kukwenya kusagadzikana uyezve murazvo unodzora, kuitira kuti kusimba kwechigadzirwa kuve kwakapetwa.
3.Good kuchengetedza kwekuchengetedza kwezvakatipoteredza
Icho chitsva chepamusoro-giredhi yekushongedza zvinhu zvekuchengetedza zvakatipoteredza mumusika. Chigadzirwa chakapedzwa chapera mushure mekupfeka kana kutsikirira. Iyo yepamusoro haidi kuvezwa zvakare, iyo inoderedza kukuvara kweiyo formaldehyde kumuviri wemunhu. Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwakanyanya, uye danho rekuchengetedza zvakatipoteredza rinogona kusvika E0 nhanho kuburikidza netekinoroji ye patent ye "net formaldehyde antibacterial".
Pashure: Wenqi musuwo
Zvadaro: Yakaputswa zambuko aruminiyamu hwindo